गीत जस्तै होला ‘ऐश्वर्य’ हिट ?
अहिले नेपाली फिल्मका शुभचिन्तकदेखि संगीतप्रेमी सबैको मुखमा गुञ्जिएको छ, ‘तिमी रोएको पल...’ । माया नगरीमा राम्रै हिट भएको यो गीत फिल्म ‘ऐश्वर्य’को हो । छठ पर्वको दिनबाट प्रदर्शनमा आउने यो फिल्मलाई गीतले प्रचारमा राम्रै सघाएको छ । यसले गर्दा प्रश्न यो उठेको छ कि गीत हिट हुँदै गर्दा फिल्म पनि हिट होला त ?
हो, गीत संगीत उत्कृष्ट भएकै कारण धेरै फिल्मले बिजनेशमा बाजी मारेको रेकर्ड फिल्म क्षेत्रमा छ । 'नाई नभन्नु ल'का संस्करणदेखि 'छक्का पन्जा २' सम्म पछिल्ला उदाहरण हुन् । त्यसैले पनि ‘ऐश्वर्य’को व्यापारिक सफलताको लागि यो गीतले ठूलो अर्थ राखेको छ ।
त्यसो त गीत मात्र होईन, यो फिल्मको सार्वजनिक ट्रेलर तथा गीतको भिडियोमा देखिएका दृश्यले पनि तारिफ पोल्टामा पारिसकेको छ । जति पनि बाहिरिएका दृश्य छन् ती सबैले दर्शकको मन छोएको पाईएको छ । फिल्ममा समावेश 'तिमी रोएको पल' बोलको गीतलाई युट्युबमा ३० लाख भन्दा बढीले हेरिसकेका छन् ।
सुदीप बरालले खिचेको यो फिल्ममा रमेश उप्रेती, प्रशान्त ताम्राकार, दीपिका प्रसाई, केकी अधिकारी, निर्मल शर्मा, अर्जुन श्रेष्ठ, केशव भट्टराई, विकास खतिवडा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । रमेश उप्रेती प्रस्तुतकर्ता रहेको यस फिल्ममा अर्जुन श्रेष्ठ र किरण राणा उप्रेती निर्माता रहेका छन् । यो फिल्मको कथा निर्देशक भट्टराई आफैले लेखेका हुन् ।